Vaovao - Ahoana ny fampiasana borosy fototra tsy misy marika borosy?
1. Ny tsara indrindra dia ny misafidy fototra misy rano.
Na dia ampiasaina aza ny borosy fototra mba hamafana ny fototra, tsy ny firafitry ny fototra rehetra no afaka miborosy ny fototra tonga lafatra. Raha te hisoroka ny marika borosy fototra ianao dia tsara kokoa ny misafidy fototra misy rano.
Satria mora zahana ny fototr'aretina, dia mora ny manaparitaka tsara ny borosy amin'ny borosy fototra, ary tsy hamela mora ny marika borosy aorian'ny fametahana azy amin'ny hoditra, ary ho tena mitovy, manify ary malama ny fototra.
2. Manaova fikojakojana kely ho an'ny borosy fototra.
Vohay ilay borosy fototra vao novidiana, ary arotsaho amin'ny fotaka vita amin'ny vifotsy ny fototra borosy vao atsofohy, atsofohy amin'ny borosy ranoka ilay borosy fototra, alao antoka fa rakotra fotony ilay volom-borona tsirairay avy ary fonosina ao anaty harona plastika na fonosana plastika Afatory ny lohan'ny borosy ary tazomy amin'ny fanjakana voaisy tombo-kase mandritra ny minitra vitsy, avy eo esory ny borosy fototra, esory mivantana ilay fototra na ampiasao lamba famaohana taratasy hamafana ny lohan'ny borosy hamafana ny fototra, amin'izay ilay borosy ho lasa malemy sy mafy orina kokoa ny loha. Ny marika borosy dia tsy mora miseho.
3. Esory amin'ny tarehy ny "丨" marobe.
Aza mampiasa borosy fototra mivantana hakana ny fototra miendrika rano ary apetaka amin'ny tavanao. Kosa, apetaho eo amin'ny felatananao na amin'ny toeran'ny toeram-ponenana ny farantsakely iray amin'ny fototra (raha mahatsapa ianao fa maina, ampio losion-dronono ary afangaro tsara), ary avy eo ampiasao ilay borosy fototra handraisana kely ny fototra ranoka Avy eo manaova marika marika 丨 "kely amin'ny tarehy, ary avy eo ampiasao ilay borosy fototra hamafana azy miadana sy miverina. Tsy hialana amin'ny famelana marika borosy ihany izany fa hanamboatra ny fanamiana borosy fototra amin'ny hateviny.
4. Tandremo ny hamafin'ny borosy fototra.
Mety nahatsikaritra ianao fa ny borosy fototra dia vita amin'ny kofehy synthetic, ka mety ho mafy kokoa ny volon-doha. Tsy maintsy mahafehy ny hery ianao amin'ny fampiasana azy. Amin'ny ankapobeny, tsara raha hikosoka amin'ny tanjaka 0, ary ny tanana tsy tokony ho mavesatra loatra hisorohana ny ratra. Ny hatevin'ny hoditra na ny fotony dia tsy mitovy, fa ny hery tsy tokony ho kely loatra, izay hitarika mora amina marika borosy sisa amin'ny borosy fototra.
5. Mahaiza ny fomba borosy amin'ny faritra samihafa.
Rehefa miborosy faritra lehibe toy ny takolaka, saoka, na handrina amin'ny borosy fototra, dia tsara kokoa ny misafidy borosy fototra miorina amin'ny lohany ary mitazona zoro 30 degre amin'ny hoditra. Rehefa miborosy ny orona, ny faritra amin'ny maso na ny molotra, soloy kely kokoa ilay izy. Ny borosy fananganana fototra / misarona dia natao hamafana ny faritry ny maso sy ireo faritra saro-takarina amin'ny tarehy, ary avy eo atsangano ilay borosy ary esory moramora indray. Amin'izany fomba izany, ny marika borosy dia tsy mora ny miseho amin'ny faritra madinidinika na ketrona.
6. Manaova asa fanadiovana tsara.
Aorian'ny fampiasana dia mila mampiasa remover matihanina matihanina ianao hanadiovana ny borosy fototra hanamorana ny fampiasana manaraka, ary amin'ny fotoana ampiasanao azy dia tsy hisy marika borosy noho ny loha borosy tsy mitovy.
7. Aorian'ny fikosehana ny fototra, aondraho rano ary kitiho ny tarehy.
Aorian'ny fampiharana ny fototra dia ampiasao rano mando hamandoana ny felatanana na spaonjy, ary avy eo tsindrio moramora indray ny makiazy fototra. Tsy hamandoana ny hoditra maina fotsiny io, fa hanala ireo marika borosy nateraky ny borosy fototra, avela ho madio sy madio kokoa ny faritra makiazy. Mifanaraka tsara.
Ireto ny torohevitra momba ny fampiasana ny borosy fototra tsy misy marika borosy. Raha tsapanao fa tsy mitovy amin'ny vovo-vovoka ny makiazy fototra, dia azonao atao ny manandrana ny vokatry ny borosy fototra. Mora ny manomboka amin'ny fampiharana bebe kokoa.
Manaova borosy, Fitaovana borosy makiazy, Barber Shave, Mametraha makiazy borosy, Faritra fiharatra, borosy makiazy napetraka,